प्रेम विवाह गरेको झोँकमा बहिनीमाथि दाजुले गोली चलाए – Gulmiews
प्रेम विवाह गरेको झोँकमा बहिनीमाथि दाजुले गोली चलाए
August 25, 2015 Sanju Kauchha
No comments	गोलबजार (सिरहा), भदौ ८ । सिरहाको लहान नगरपालिका– २० स्थित सिंग्राहीका एक युवकले आज बिहान आफ्नै बहिनीमाथि गोली चलाएका छन् । गोली लागेर स्थानीय २३ वर्षीया रेणुकुमारी महतो गम्भीर घाइते भएकी छन् । घाइते रेणुलाई उपचारका लागि विराटनगर लगिएको छ ।
रेणुको बिहे गत वर्ष सिरहाको चौहर्वामा गरिदिइएको थियो, तर त्यहाँबाट भागेर सिंग्राहीस्थित घर अगाडि नै प्रेम विवाह गरी आएको झाँेकमा भाइले नै गोली चलाएर मार्ने प्रयास गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीय सन्तोष महतोले भन्नुभयो –“पहिले रेणुमाथि गोली प्रहार भयो । तर कपालमा हल्कामात्र लाग्यो । त्यसपछि धारिलो हतियारले रेणुको हात र टाउकोमा प्रहार गरेर अवस्था गम्भीर बनायो ।” गोली चलाउने दाजु उमेश साह भने फरार भएका छन् ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले रेणुमाथि गोली प्रहार नभई धारिलो हतियारमात्र प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएको बताउनुभएको छ । उहाँले घटनाबारे विशेष अनुसन्धान भइरहेको पनि बताउनुभयो । रासस
Related Posts	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	October 18, 2016	कोदालोले हानेर बृद्ध आमाको हत्या गर्ने छोरा पक्राउ...	September 23, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)